हेलिकोप्टरबारे आयो यस्तो नयाँ नियम, के दुर्घटना कम होला ? – जलजला अनलाइन
हेलिकोप्टरबारे आयो यस्तो नयाँ नियम, के दुर्घटना कम होला ?
Posted on March 8, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on हेलिकोप्टरबारे आयो यस्तो नयाँ नियम, के दुर्घटना कम होला ?
फागुन २४, काठमाडौं । सरकारले ७ सिटे (६+१) हेलिकप्टोरबाट बेन्च सिट हटाउन सुरु गरेको छ ।
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको यस्तै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हलिकोप्टरबाट बेन्च सिट हटाउन कम्पनीहरुसँग सहमति गरेको छ ।
त्यसैका आधारमा केही कम्पनीहरुले बेन्च सिट हटाइसकेका छन् । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार एएस ३५०को ६+१ सिटवाला हेलिकोप्टरलाई अब ५+१ मा राखेर मात्रै राखेर चलाउने सहमति भएको छ ।
एयरबसका हेलिकप्टरमा यस्ता बेन्च सिटहरु हुन्छन् । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार झण्डै एक दर्जन यस्ता सिट हटाइसकिएको छ ।
‘यस्ता सिट कम्पनीमै जोडिएका हुन्छन् । तर, उच्च हिमाली क्षेत्रमा उडान गर्दा यस्ता सिटमा यात्रु राख्न सुरक्षाका हिसावले उचित देखिएन,’ प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने, ‘यात्रु तथा पाइलटको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दा पनि ७ सिटे हेलिकोप्टरको बेन्च सिटलाई हटाउनुपर्छ भनेर निश्कर्षमा पुगेका हौं ।’
हेलिकोप्टर कम्पनीहरु पनि बेन्च सिट हटाउन तयार भएका छन् । महानिर्देशक गौतम नेपालको बिशिष्ट भूगोललाई ध्यानमा राखेर यस्तो सहमति बनेको बताउँछन् ।
फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा यस्तै ६ प्लस १ क्षमताको एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा हुँदा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहति ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै प्राधिकरणले सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रको गोरक्षा हेलिप्याडमा तत्कालका लागि उडान अवतरण रोकेको छ । त्यहाँको मौसमको प्रतिकुलता र दैनिक रुपमा बढ्दो हेलिकोप्टरको चापलाई हेरेर उडान अवतरण रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिबारे आयो यस्तो खुशीको खबर !
Posted on October 26, 2018 Author Jaljala Online
कात्तिक ९, काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेश सदरमुकामबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । यससँगै वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले मंसिरदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई प्रदेशबाटै सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको […]
जनप्रतिनिधिलाई विप्लवको उर्दी: राजीनामा देऊ, जनसरकार बनाउँछौँ
Posted on March 18, 2018 March 18, 2018 Author जलजला अनलाइन
चैत ४, काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्नियुष्ट पार्टीले जाजरकोटका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न उर्दी जारी गरेको छ । भेरी–कर्णाली स्वायत्त प्रदेश जिल्ला जनपरिष्दको लेटर प्याडमा पत्र काट्दै राजीनामाको माग गरिएको हो । जिल्ला जनपरिषदका अध्यक्ष हरिचन्द्र जैसी अनुकूलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबारदेखि स्थानीय गाउँ टोलसम्म भष्टाचारी, कालोबजारी तथा सामाजिक दलाली, गुण्डागर्दी, लुटपाट, […]
जापानले कस्ता श्रमिक, कुन क्षेत्रमा, कसरी लैजान्छ ? जानी राख्नुहोस
Posted on January 8, 2019 Author Jaljala Online
पुस २४, काठमाडौं । जापानले नेपालसहित विभिन्न देशका श्रमिकहरुलाई औपचारिक रुपमा नै लैजाने निर्णय गरेपछि त्यसले नेपाली श्रमिक बजार तताएको छ। यो खबर नेपालखबरमा छ, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहाने हजारौं युवायुवतीहरु जापानमा कहिले, कसरी जान सकिन्छ भन्ने चासो पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म जापानले विधार्थी भिषामा मात्रै नेपालीहरु लग्ने भएपनि पढाईसँगसँगै राम्रो कमाई हुने भएकाले […]
सर्वोच्चको आदेशबाट छुटेको भोलिपल्टै सिके राउतले देखाए यस्तो चमत्कार
अपहरणमुक्तपछि सांसद मल्लले दिईन यस्तो अचम्मको प्रतिक्रिया